८ गल्तीले तपाईंलाई जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ ! – Jagaran Nepal
८ गल्तीले तपाईंलाई जवानीमै बूढो बनाइदिन्छ !
बिहान देखि बेलुकासम्म कतिपय अवस्थामा हामीले यस्ता गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ जसले स्वास्थ्यमा ग’म्भीर असर पारिरहेको हुन्छ । यस्ता सामान्य गल्तीले हाम्रो छालामा प्रभाव पार्दछ र हामी कम उमेरमै बूढो देखिन थाल्छौँ ।
हाम्रो अनुहारमा आउने पिम्पल, चाउरीपना, पोतो र छाला सम्बन्धी अन्य समस्याले सिधै हाम्रो उमेरलाई बढाइदिन सक्छ । त्यस्ता गल्तीप्रति ध्यान दियौँ भने आफ्नो छालालाई जवान राख्न सक्नेछौँ ।
एकैसाथ धेरै काम